NOOCYADA KALA DUWAN CABBIRRADA: SHARAXAADDA, DARYEELKA, URURINTA IYO SAWIRRADA - NOOCYO KAABASH
Kaabashka "gardarro" - noocyo kala duwan oo yaryar, oo leh dabiicado cimilada, dhadhan wanaagsan iyo dhalid aad u fiican. In this article waxaan ku siin doonaa sharaxaad ka mid ah dhirta this, kuu sheegi faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida, iyo sidoo kale tixgeliyaan xeerarka beeritaanka iyo daryeelka.
Qeexida noocyo kaabajka "Agressor"
Qaar ka mid ah "gardaroole" ayaa la soo raray sannadkii 2003-dii shirkad farsamo oo reer Holland ah. Tani waa dhexdhexaad ah kaabajka bartamihii dhexe. Waxay leedahay maqaal sare. Waraaqaha waa mid dhexdhexaad ah, oo wareegsan, cagaar mugdi ah ama midab-cagaaran, oo leh geeso yar yar.
Iska hubi liiska noocyada kala duwan ee caddaan, casaan, jeexan, kaabajka digo, broccoli, kohlrabi iyo kaabajka kale.
On dushiisa ayaa si fiican u cidhib tiran wax-soo-saarka. Madaxyadana waa la qabsadey, cufnaanta. Marka goosashadu ay la socoto caddaan ah oo leh jilbaal jaale ah. Dhererka jirida waa 16-18 cm. Celcelis ahaan, culeyska madaxa ayaa gaari kara 3-5 kg. Kala duwanaanshahan waxay keenaysaa dhalid aad u fiican - oo ku saabsan tuun ka timid boqol mitir oo laba jibbaaran.
Geedka waxaa lagu gartaa nidaam xidid adag. Waxay leedahay dhadhan wacan, caleemo casiir leh iyo caleemo qallalan. Waxaa loo isticmaalaa halsano, iyo diyaarinta saladhka.
Ma taqaanaa? Shiinaha, kaabash waxaa loo tixgeliyaa calaamad hanti.
In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada kaabajka "Aggressor" ay horey u soo jiidatay waxyaabo badan, oo ay weheliso tayada wanaagsan, waxay leedahay tiro astaamo ah.
Faa'iidooyinka "Gardaro" waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
aan qabin xaalad sii kordhaysa (xitaa xitaa carrada saboolka ah);
sida caadiga ah waxay keenaysaa biyo la'aan, uma baahna waraabin joogta ah;
biqilka abuurka - 100%;
muuqaalka quruxda leh ee suurtagelisa in la isticmaalo iibka;
ku habboon gaadiidka;
waxaa lagu keydin karaa qiyaastii 5 bilood iyada oo aan lumin hantida;
caabbinta qashinka, iyo sidoo kale cayayaanka badan.
Baro wax badan oo ku saabsan noocyada kaabajka ah sida "Gift" iyo "Megaton".
marka salting ay dhadhamin karaan dhadhanka;
oo ay ku xiran tahay weerarada cadaanka ah iyo weerarada aphid;
inta badan waxaa ka mid ah cudurada fangas, ugu daran - kila.
Waxaad ka heli kartaa geedo kaabajka labadaba xaaladaha gudaha iyo beerta.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso abuurka. Wixii beerta dooran kaliya kuwa kuwooda oo aan ka yarayn 1.5 mm. Ka dibna miraha waxaa lagu qoynayaa ilaa 20 daqiiqadood biyo kulul oo qiyaas ah (qiyaastii 50 ° C) si loo dilo bakteeriyada kala duwan. Ka dib markaa waxaa la dhigayaa 2-3 daqiiqo biyo qabow oo la qalajiyey.
Beeray horraantii Abriil. Dhoobo 7-8 cm oo qoto dheer ayaa ku haboon, isku dar ah ciidda, peat iyo ciid ayaa loo qaataa ciid. Waxay abuuraan abuurka si qoto dheer ah 1 cm, masaafada u dhexeysa waa 3 cm Caleemaha kowaad waxay muujiyaan 5-7 maalmood.
Meesha ugu fiican ee lagu hayo geedo waa windowsill, halkaasoo ay tahay iftiin iyo heerkulku wuxuu gaaraa 15-18 ° C. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la qaato dheriyada bannaanka ka baxsan si loo demiyo inta lagu jiro maalinta haddii heerkulku aanu hoos udhicin 6-8 ° C. Habeenkii, kaabajka ayaa la geeyaa guriga.
Waa muhiim! Geedo u baahan yihiin si ay u quudiyaan Bacriminta macdanta. Isticmaalka arrin bakeeriga ah ujeedadaas laguma talinayo.
Sida ugu dhakhsaha badan laba caleemood ayaa la sameeyay, waxaad samayn kartaa quudinta ugu horeysa. Labaad ayaa la bixiyaa 12-15 maalmood ka dib, iyo saddexaad - dhowr maalmood ka hor transplanting beerta.
Haddii miraha lagu beeray si toos ah beerta, markaas waxaad u baahan tahay inaad sugto dhammaadka Abriil. Dhulka ayaa loo doortaa si fiican u iftiiminaya qorraxda. Ka hor inta beero, dhulku wuxuu u baahan yahay in lagu kobciyo nafaqooyinka, waxaad samayn kartaa humus qasiinka. Seeds waxaa la geeyaa dhulka oo qoto dheer oo ah 1 cm, sida caadiga ah, 2-3 gogo 'ayaa lagu ridaa god kasta. U hubso inaad sariirta ku daboosho foorno si aad u siiso diirran caleemaha yar yar.
Waxaa ka mid ah sprouts la sameeyay, waxay doortaan mid xoog badan, inta kale ayaa la saaraa ama loo wareejiyaa meel kale.
Ka dib 35-40 maalmood oo ah koritaanka seedling, waxaa mar hore loo rogi karaa in la furo dhulka. Si aad tan u samayso, waxaad u baahan tahay inaad sameysid meelo yaryar, waxaad sidoo kale isla markiiba dhigi kartaa labiska humus, sand, peat iyo ash qoryo. Biyaha waxaa lagu shubay daloolka (0.5 l) iyo seedling waxaa la xoojiyey oo keliya caleen ugu horeysa.
Kaabashka waxaa lagu beeray fogaan ah 50-70 cm inta u dhaxaysa duurka iyo 60 cm u dhexeeya saf, maxaa yeelay noocyada kala duwan waxay u baahan tahay aag ballaaran oo kobcinta xoog leh.
Waa muhiim! Waa suurtagal in la beero geedka halkaas oo gaduudka, radishes ama radishes horey u koray.
Noocyada kala duwan ee loo yaqaan "Aggressor" - khudradda qoyan-jecel, sidaas darteed waxay u baahan tahay waraabin badan. Ka dib markii la beerto 14 maalmood, waxaa la sameeyaa waraabinta 3-dii maalmoodba mar, kadibna hal jeer hal mar toddobaadkii (ilaa 10 litir oo biyo ah halkii mitir oo labajibbaaran). Waxaa muhiim ah in biyaha uu ku yaalo heerkulka qolka, maadaama uu qaboowgu uu waxyeelo u geysto geedka. Nidaam muhiim ah ee kobaca degdegga ah waa hilling, kaas oo la sameeyo maalinta 20aad kadib marka la furo. Tani waxay ka caawineysaa xoojinta geedka iyo muuqaalka xididada dheeraadka ah. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in si joogta ah loo daboolo dhulka ka dib waraabin kasta oo ka saar caws.
Way fiicantahay maalmaha ugu horeeya ee lagu daadiyo sariiro dambas ah - tani waxay kaa caawineysaa inaad ka cabato caleemaha ka fogaanta khudaarta qaangaarka ah.
Saameynta wanaagsan ee bacriminta kaabash. Tan waxaa badanaa la sameeyaa 3 jeer inta lagu jiro xilliga koritaanka:
20 maalmood ka dib marka la furo - 0.5 litir oo mullein ah 10 litir oo biyo ah. On hal baadiyaha waxay leedahay 0.5 litir oo isku dar ah.
10 cisho ka dib markaad quudinta ugu horeysa ee sidan oo kale ah.
Horraantii Juun - 2 tbsp. l bacriminta macdanta on baaldi biyo ah. 1 mitir oo labajibbaaran ayaa u baahan 8 litir oo dareere ah.
Ma taqaanaa? Kaabashka waa 91% biyaha.
Inkastoo xaqiiqda ah "gardarrada" ay u adkaysato cuduro badan, haddana waxaa jira weriyaal, awood u leh inuu waxyeelo u geysto:
Cabbage Mole - Waxaa jira godad iyo ukunta ku yaal xaashida gadaasha. Calcium arsenate ama xal chlorophos waxay ku habboon tahay daaweynta.
Cabbage Aphid - caleemaha noqdaan casaan. Ka takhalus inaad iska tirtirto caleemaha leh caarad lagu rusheeyey biyo saabuun ama caano.
Kaabashka Fly - Wuxuu waxyeelleeyaa xididada, isaga oo u dhaqaaqaya. Isku dar ah tubaakada (1 tbsp L.), ash Wood (10 g) iyo basbaaska dhul cas (1 tsp.) Waxaa loo isticmaalaa halkii mitir oo laba jibbaaran.
Rapeseed Bilan - Cuna qabatooyin, cuno ukun. Codso isku mid ah sida aboorka kaabajka.
Snails iyo slugs - waxyeelada dhaawaca, ka tagto raad gaar ah. Under kasta baadiyaha si gelin jilicsan ee daroogada "Thunder" ama "Meta" (3-4 gogo ').
Cudurada taas oo kala duwanaanshahani soo baxo:
Quila - cudur fungal ah, taas oo ka dhalatay taas oo geedka gilgilay, isbedelo midabka. On xididada koraya, ka qaybqaatay in si kicin. Habka ugu caansan ee halganka waa in laga saaro duurka cudurka qaba, iyo ka hor inta laga beerto xididada waxaa lagu daaweeyaa xal dhoobo ah.
Lugta madow - madoobaan ee collar xididka iyo saldhigga aasaasiga ah, ay qoyaan. Ka hor inta beerto geedka dhulka, xididada waxaa lagu dhajiyay xal milan oo leh dhirta potassium.
Qanjiraha Downy - muuqaalka kore ee dhibco huruud ah iyo lakabyo cawl on caleemaha. Wixii soo saara iyada oo la isticmaalayo xal 1% oo ah dareeraha Bordeaux.
3 usbuuc ka hor goosashada, kaabajka aan la sii daadin, u oggolaanaya in cellulose ay isku uruursato. Taasi waxay gacan ka geysaneysaa kaydinta wanaagsan. Waxay ku urursan yihiin dhammaadka Sebtembar - bilawga Oktoobar, marka heerkulka hawada habeenkuna uu u dhaxeeyo 0 ilaa -2 ° C. Kaabashka ku nadiifi cimilada qalalan leh mindi fiiqan. Waa lagama maarmaan inay ka baxdo jirida 3-4 cm dheer iyo laba caleemo sare si ay khudradda u qaadato nafaqooyinka laga helo. Isla markiiba waa lagama maarmaan in la kala saaro madaxa madaxa waxyeellada leh oo u soo dir si dib loogu warshadeynayo, maaddaama oo kaliya munaasabadaha caafimaad oo dhammaystiran lagu kaydin karo. Ka hor inta aan la dhigin maqaasiinka, kaabajka waxaa lagu hayaa hoostiisa ilaa 24 saacadood, taas oo u oggolaanaysa in ay qalalaan.
Heerkulka ugu fiican ee kaydinta waa + 1 ... + 6 ° S, iyo qoyaanka hawadu ma aha wax ka yar 90%. Madaxda waxaa lagu hayaa sanduuqyada alwaaxda ah ama lagu daboolay dhowr saf, oo aan ahayn dabaqa. Goobaha waxaa sidoo kale lagu xiri karaa saqafka, sidaas darteed hubinta in hawo wanaagsan. Beerta qaar waxay ku duudduubtay warqad iyaga oo ku riday qalabka, ama gebi ahaanba ku rid baaldi ciid ah.
Waa muhiim! Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in khudaarta aysan helin iftiin, haddii kale waxay bilaabi doonaan Gagaash.
Koraaya noocyada kaabajka ah "gardarrada" waa mid sahlan, sababtoo ah waa wax aan hoos u dhicin daryeelka iyo adkeysiga xaaladaha aan fiicnayn. Waxa kale oo ay leedahay dhadhan fiican oo lagu kaydin karaa waqti dheer.